Fepetra fampiasana - ExoSpecial
Ny tranokala ExoSpecial.com dia asa misy zon'ny mpamorona an'ny ExoSpecial. Ny endri-javatra sasany amin'ny tranokala dia mety iharan'ny torolalana, fepetra, na fitsipika fanampiny, izay hapetraka ao amin'ny tranokala mifandraika amin'ny endri-javatra toy izany.
Ireo fepetra fampiasana ireo dia namaritra ny fepetra sy fepetra ara-dalàna izay manara-maso ny fampiasanao ny tranokala. Amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny tranokala dia manaja ireto fepetra ireto ianao ary maneho fa manana fahefana sy fahafahana miditra amin'ireo fepetra ireo ianao. TOKONY 18 TAONA FARA FAHA ARA-KEVITRA IANAREO HIDITRA NY SITE. RAHA TSY MIARAKA AMIN'NY IRAY amin'ireo fepetra ireo ianao dia aza mampiasa ilay tranokala.
Fandraisana amin'ny tranokala
Miankina amin'ireo fepetra ireo. ExoSpecial dia manome anao fahazoan-dàlana tsy azo afindra, tsy manokana, azo esorina, voafetra hidirana amin'ny tranokala ho an'ny fampiasanao manokana sy tsy ara-barotra ary mandrara tanteraka ny endrika fikikisana angon-drakitra.
Fameperana sasany. Ny zon'olombelona nankatoavina taminao tao anatin'ireto fehezan-dalàna ireto dia iharan'ireto fepetra manaraka ireto: (a) tsy tokony hivarotra, hanofa, hanofa, hamindra, hanome, hizara, hampiantrano, na hitrandraka ny tranokala amin'ny fomba hafa ianao; b) tsy tokony hanova ianao, tsy hanao asa avy amin'ny derivative, handrava, hamerina hanangana na hampivadika injeniera ny faritra rehetra amin'ny tranokala; (c) tsy hiditra amin'ny tranokala ianao raha te hanangana tranokala mitovy na mifaninana; ary (d) afa-tsy izay voalaza mazava tsara eto, tsy misy ampahany amin'ny tranokala azo adika, alefa, zaraina, havoaka indray, alaina, aseho, alefa na ampita amin'ny endriny hafa na amin'ny fomba hafa raha tsy misy fanondroana hafa, famoahana, fanavaozana amin'ny ho avy, na ny fanampiana hafa amin'ny fampiasa amin'ny tranokala dia iharan'ireto fepetra ireto. Ny zon'ny mpamorona sy ny fanamarihana rehetra an'ny tompona tranokala dia tsy maintsy tazonina amin'ny kopia rehetra ao aminy.
Ny orinasa dia manana zo hanova, hampiato, na hampitsahatra ny tranokala miaraka aminao na tsy misy fampandrenesana aminao. Nanaiky ianao fa ny orinasa dia tsy tompon'andraikitra aminao na amin'ny antoko fahatelo amin'ny fanovana, fanelingelenana, na famaranana ny tranokala na ampahany.
Tsy misy Fanohanana na Fikojakojana. Manaiky ianao fa ny orinasa dia tsy hanana adidy hanome anao fanampiana manoloana ny tranokala.
Raha tsy tafiditra ao ny votoatin'ny mpampiasa izay azonao omena, dia fantatrao fa ny zon'ny fananana ara-tsaina rehetra, anisan'izany ny zon'ny mpamorona, ny patanty, ny marika ary ny tsiambaratelo ara-barotra, ao amin'ny tranokala sy ny atiny dia an'ny orinasa na mpamatsy orinasa. Mariho fa ireo fepetra ireo sy ny fidirana amin'ny tranokala dia tsy manome anao zo, anaram-boninahitra na tombontsoa na amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina, afa-tsy ny zo fidirana voafetra voalaza ao amin'ity fifanarahana ity. Ny orinasa sy ny mpamatsy azy dia mitahiry ny zo rehetra tsy omena amin'ireo fepetra ireo.
Rohy sy doka an'ny antoko fahatelo; Mpampiasa hafa
Rohy sy doka an'ny antoko fahatelo. Ny tranokala dia mety ahitana rohy mankany amin'ny tranokala sy serivisy an'ny antoko fahatelo, ary / na mampiseho dokam-barotra ho an'ny antoko fahatelo. Ny Rohy & Doka Antoko fahatelo toy izany dia tsy eo ambany fifehezan'ny Orinasa, ary ny Orinasa dia tsy tompon'andraikitra amin'izay Rohy & Doka avy amin'ny antoko fahatelo. Ny orinasa dia manome ny fidirana amin'ireo Rohy & Doka an'ny antoko fahatelo ireo ho fanamorana anao fotsiny, ary tsy mandinika, mankasitraka, manara-maso, manohana, manome toky, na manao fanehoana momba ny Rohy & Doka avy amin'ny antoko fahatelo. Ampiasainao amin'ny risikao manokana ny Rohy & Doka an'ny antoko fahatelo rehetra, ary tokony hampihatra ny fahamalinana sy ny fahamalinana mety amin'ny fanaovana izany. Rehefa manindry ny iray amin'ireo Rohy & Doka avy amin'ny antoko fahatelo ianao, dia mihatra ny fepetra sy ny politikan'ny antoko fahatelo manan-kery, ao anatin'izany ny tsiambaratelon'ny antoko fahatelo sy ny fomba fanangonam-baovao.
Mpampiasa hafa. Ny mpampiasa Site tsirairay dia tompon'andraikitra irery amin'ny votoatin'ny mpampiasa azy manokana. Satria tsy mifehy ny votoatin'ny mpampiasa izahay, dia manaiky sy manaiky ianao fa tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny mpampiasa izahay, na omenao na avy amin'ny hafa. Manaiky ianao fa ny orinasa dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fatiantoka na fahasimbana vokatry ny fifandraisana toy izany.
Ianao dia manafaka sy manaisotra mandrakizay ny Orinasa sy ireo tompon'andraikitra, mpiasa, mpiasa, mpandimby, ary mpanome avy aminay, ary manafoana sy miala, ny fifanolanana rehetra taloha, ankehitriny sy ho avy, fitakiana, fifandirana, fitakiana, zo, adidy, andraikitra, hetsika sy anton'ny hetsika isan-karazany sy ny natiora, izay nipoitra na nipoitra mivantana na ankolaka avy amin'ny, na mifandray mivantana na ankolaka amin'ny Site. Raha monina any Kalifornia ianao, dia mandà ny fehezan-dalàna sivily Kalifornia 1542 mifandraika amin'ireo voalaza teo aloha ianao, izay milaza hoe: "Ny famotsorana ankapobe dia tsy miitatra amin'ny fitakiana izay tsy fantatry ny mpampindram-bola na ahiahiana fa misy amin'ny tombontsoany amin'ny fotoana hanatanterahana ny famotsorana, izay raha fantany dia tsy maintsy nisy fiantraikany ara-materialy tamin’ny mpanelanelana tamin’ny mpitrosa.”
Cookies sy Fanilo Internet. Tahaka ny tranokala hafa rehetra, ExoSpecial dia mampiasa 'cookies'. Ireo cookies ireo dia ampiasaina hitehirizana fampahalalana ao anatin'izany ny safidin'ny mpitsidika, ary ny pejy ao amin'ny tranokala izay nidiran'ny mpitsidika na notsidihina. Ny fampahalalana dia ampiasaina hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny atiny pejin-tranonkala mifototra amin'ny karazana navigateur sy/na fampahalalana hafa.
Ny tranokala dia omena amin'ny fototra "araka ny misy" sy "araka ny misy", ary ny orinasa sy ny mpamatsy antsika dia mandà mazava ny antoka rehetra sy ny fepetra rehetra na inona na inona, na mazava izany, na an-tsoratra, na ara-dalàna, ao anatin'izany ny antoka rehetra na ny fepetra momba ny varotra. , mety amin'ny tanjona manokana, anaram-boninahitra, fahafinaretana mangina, marina, na tsy fanitsakitsahana. Izahay sy ny mpamatsy anay dia tsy manome antoka fa hahafeno ny fepetra takinao ny tranokala, ho hita tsy tapaka, ara-potoana, azo antoka, na tsy misy hadisoana, na ho marina, azo ianteherana, tsy misy viriosy na code manimba hafa, feno, ara-dalàna. , na azo antoka. Raha mitaky antoka momba ny tranokala ny lalàna manan-kery, dia voafetra ny faharetan'ny sivifolo (90) andro manomboka amin'ny daty fampiasana voalohany ny fiantohana rehetra.
Ny faritra sasany dia tsy mamela ny fanilihana ny antoka azo antoka, noho izany ny fanilihana etsy ambony dia mety tsy hihatra aminao. Ny faritra sasany dia tsy mamela fetra amin'ny faharetan'ny fiantohana tsy azo antoka, noho izany ny fetra etsy ambony dia mety tsy hihatra aminao.
Famerana amin'ny andraikitra
Raha faran'izay lehibe avelan'ny lalàna, na iza na iza orinasa na mpamatsy antsika dia tsy tompon'andraikitra aminao na amin'ny antoko fahatelo ho an'ny tombom-barotra very, ny angon-drakitra very, ny vidin'ny fividianana vokatra solony, na izay tsy mivantana, vokatr'izany, ohatra, na tranga hafa. fahasimbana manokana na sazy mipoitra na mifandraika amin'ireo teny ireo na ny fampiasanao azy, na ny tsy fahafahanao mampiasa ny tranokala na dia efa nanoro hevitra ny orinasa aza ny mety hisian'ny fahasimbana toy izany. Ny fahazoana miditra sy fampiasana ny tranokala dia miankina amin'ny sainao manokana sy ny loza mety hitranga, ary ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana amin'ny fitaovanao na ny rafitry ny solosainao, na ny fahaverezan'ny angona azo avy amin'izany.
Raha faran'izay avelan'ny lalàna, na eo aza ny zavatra mifanohitra amin'izany, ny adidinay aminao noho ny fahasimbana naterak'ity fifanarahana ity dia ho ferana hatramin'ny 50 dolara amerikana (us $ XNUMX) hatrany. Ny fisian'ny fitakiana mihoatra ny iray dia tsy hampitombo io fetra io. Manaiky ianao fa ny mpamatsy anay dia tsy hanana andraikitra na inona na inona avy amin'ny fifanarahana.
Ny faritra sasany dia tsy mamela ny famerana na ny fanilihana ny andraikitra noho ny fahasimbana sendra na vokatr'izany, noho izany ny fetra etsy ambony na ny fanilihana dia mety tsy hihatra aminao.
Famaranana sy famaranana. Miankina amin'ity fizarana ity, ireo fepetra ireo dia hitoetra amin'ny heriny sy ny vokany rehefa mampiasa ny tranokala ianao. Afaka mampiato na manafoana ny zonao hampiasa ny tranokala amin'ny fotoana rehetra izahay noho ny antony rehetra araka ny fanapahan-kevitray manokana, ao anatin'izany ny fampiasana ny tranokala amin'ny fanitsakitsahana ireo fepetra ireo. Rehefa tapitra ny zonao amin'ireo fepetra ireo, ny kaontinao sy ny zonao hidirana sy hampiasa ny tranokala dia hifarana avy hatrany. Fantatrao fa ny fampitsaharana ny kaontinao dia mety ahitana ny famafana ny votoatin'ny mpampiasa mifandray amin'ny kaontinao avy amin'ny angon-drakitra mivantana. Ny orinasa dia tsy hanana andraikitra aminao na inona na inona fanafoanana ny zonao araka ireo fepetra ireo.
Manaja ny fananan'ny hafa ny orinasa ary mangataka amin'ireo mpampiasa ny tranokalanay mba hanao toy izany koa. Mifandray amin'ny tranokalanay, dia nandray sy nampihatra politika momba ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona izay manome ny fanesorana ireo fitaovana mandika sy ny fampitsaharana ireo mpampiasa ny tranokalanay izay mandika ny zon'ny fananana ara-tsaina, anisan'izany ny zon'ny mpamorona. Raha mino ianao fa ny iray amin'ireo mpampiasa anay dia manitsakitsaka tsy ara-dalàna ny zon'ny mpamorona amin'ny asa iray, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokalanay, ary maniry ny hanaisotra ireo fitaovana voalaza fa mandika, ireto fampahalalana manaraka ireto amin'ny endrika fampahafantarana an-tsoratra (araka ny hatramin'ny 17 USC § 512(c)) dia tsy maintsy omena:
ny sonia ara-batana na elektronika anao;
famantarana ny sanganasa manana zon'ny mpamorona izay lazainao fa voahitsakitsaka;
ny famantarana ny fitaovana ao amin'ny serivisinay izay lazainao fa manimba ary mangataka aminao izahay mba hesorinay;
fampahalalana ampy hahafahantsika mitady izany fitaovana izany;
ny adiresy, ny nomeraon-telefaona ary ny adiresy mailakao;
fanambarana fa manana finoana tsara ianao fa tsy mahazo alalana ny fampiasana ny fitaovana tsy azo ekena; SY
fanambarana iray fa marina ny fampahalalana ao amin'ny fampandrenesana, ary eo ambanin'ny sazin'ny fianianana, fa ianao dia tompon'ny zon'ny mpamorona izay voalaza fa voahitsakitsaka na nomena alalana hiasa amin'ny anaran'ny tompon'ny zon'ny mpamorona.
Mariho fa, araka ny 17 USC § 512(f), ny fanehoan-kevitra diso momba ny zava-misy ara-materialy amin'ny fampandrenesana an-tsoratra dia mametraka ho azy ny antoko mitaraina ho tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana, ny fandaniana ary ny saram-pandraharahana nataonay mifandraika amin'ny fampahafantarana an-tsoratra sy ny fiampangana ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona.
Ireo fepetra ireo dia iharan'ny fanavaozana tsindraindray, ary raha manao fiovana lehibe izahay, dia mety hampandre anao amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka anao amin'ny adiresy mailaka farany nomenao anay sy/na amin'ny alàlan'ny famoahana mazava ny fampandrenesana ny fanovana ao amin'ny tranokalanay. Site. Ianao no tompon'andraikitra amin'ny fanomezana anay ny adiresy mailakao farany indrindra. Raha toa ka tsy manan-kery ny adiresy imailaka farany nomenao anay, ny fandefasanay ny mailaka misy filazana toy izany dia ho fampahafantarana mahomby amin'ny fanovana voalaza ao amin'ny filazana. Ny fanovana rehetra amin'ireo fepetra ireo dia manan-kery mandritra ny telopolo (30) andro voalohany amin'ny kalandrie aorian'ny nandefasanay fampandrenesana mailaka ho anao na telopolo (30) andro kalandrie taorian'ny nandefasanay ny fampandrenesana ny fanovana ao amin'ny tranokalanay. Ireo fanovana ireo dia hahomby avy hatrany ho an'ireo mpampiasa vaovao amin'ny tranokalanay. Ny fampiasana tsy tapaka ny tranokalanay aorian'ny fampahafantarana momba ny fanovana toy izany dia manondro ny fanekenao ny fanovana toy izany sy ny fifanarahana ho voafatotry ny fepetra sy ny fepetra amin'ny fanovana toy izany.
Vakio tsara ity Fifanarahana Arbitration ity. Anisan'ny fifanarahanao amin'ny Orinasa izany ary misy fiantraikany amin'ny zonao. Izy io dia mirakitra fomba fiasa momba ny FANDAHARANA FAMPANDROSOANA SY FAHAFATESANA KLASSY.
Fampiharana amin'ny fifanarahana arbitration. Ny fitakiana sy ny fifanolanana rehetra mifandraika amin'ny Fepetra na ny fampiasana vokatra na serivisy omen'ny orinasa izay tsy voavaha tsy ara-potoana na amin'ny tribonaly fitakiana kely dia voavaha amin'ny alàlan'ny fifamatorana arbitration amin'ny lafiny tsirairay eo ambanin'ny fehezan'ity fifanarahana arbitration ity. Raha tsy hoe nifanarahana ny hevitra hafa, dia hatao amin'ny teny Anglisy ny fizotran'ny fitsarana rehetra. Ity fifanarahana Arbitration ity dia mihatra aminao sy amin'ny orinasa ary amin'ireo sampana, mpiara-miasa, mpiasa, mpiasa, mpisolo toerana misy tombontsoa, ​​mpandimby ary andraikitra, ary koa ireo mpampiasa na nahazo alalana na mpahazo tombony amin'ny serivisy na entana omena ao ambanin'ny Fepetra.
Filazana fampandrenesana sy fanapahan-kevitra momba ny fifanolanana tsy ara-potoana. Alohan'ny ahafahan'ny andaniny sy ny ankilany hangataka ny fanelanelanana, ny andaniny dia tsy maintsy mandefa taratasy fampandrenesana an-tsoratra momba ny fifanolanana amin'ny andaniny sy ny ankilany mamaritra ny toetra sy ny fototry ny fitakiana na fifandirana, ary ny fanampiana nangatahana. Tokony halefa amin'ny legal@exospecial.com. Rehefa voaray ny Fampandrenesana, ianao sy ny Orinasa dia mety manandrana mamaha ny fitakiana na miady tsy ara-potoana. Raha tsy mamaha ny fitakiana na ny fifandirana ianao sy ny Orinasa ao anatin'ny telopolo (30) andro aorian'ny naharay ny Fampandrenesana, dia mety hanomboka fitsarana fitsarana ny andaniny sy ny ankilany. Ny habetsaky ny tolotra fampihavanana ataon'ny antoko rehetra dia tsy azo ambara amin'ny mpanalalana raha tsy aorian'ny famaritan'ny mpanelanelana ny habetsaky ny loka azon'ny andaniny sy ny ankilany.
Fitsipika arbitration. Ny Arbitration dia atomboka amin'ny alàlan'ny American Arbitration Association, mpanome vahaolana hafa amin'ny famahana ny fifandirana izay manolotra fanelanelanana araka ny voalaza ato amin'ity fizarana ity. Raha tsy misy ny AAA amin'ny fitsaràna, ny andaniny dia manaiky hifidy Mpanome ADR hafa. Ny fitsipiky ny Mpanome ADR dia hifehy ny lafiny rehetra amin'ny fitsaràna afa-tsy raha toa ka mifanohitra amin'ny fepetra ny fitsipika toy izany. Ny Fitsipika Arbitration Consumer AAA mifehy ny arbitration dia azo jerena amin'ny Internet ao amin'ny ADR.org na amin'ny fiantsoana ny AAA amin'ny 1-800-778-7879. Ny arbitration dia tsy maintsy ataon'ny arbitrateur tokana tsy miandany. Izay fitakiana na fifandirana izay latsaky ny Arivo dolara amerikana (10,000.00 dolara amerikana) ny fitambaran'ny totalin'ny loka notadiavina dia mety ho voavaha amin'ny alàlan'ny fifampiraharahana tsy miankina amin'ny fisehoana ivelany, araka ny safidin'ny antoko mitady fanamaivanana. Ho an'ny fitakiana na fifandirana izay ny totalin'ny loka notadiavina dia folo arivo dolara amerikana (US $10,000.00) na mihoatra, ny zo amin'ny fitsarana dia hofaritan'ny lalànan'ny Arbitration. Ny fihainoana rehetra dia hatao amin'ny toerana iray ao anatin'ny 100 kilaometatra amin'ny fonenanao, raha tsy hoe mipetraka any ivelan'i Etazonia ianao, ary raha tsy manaiky ny mifanohitra amin'izany ny andaniny. Raha mipetraka any ivelan'i Etazonia ianao, ny mpanelanelana dia hanome fampandrenesana ara-drariny amin'ny andaniny sy ny ankilany momba ny daty, ny ora ary ny toerana hanaovana ny fihainoana am-bava. Ny didim-pitsarana rehetra momba ny mari-pankasitrahana nomen'ny mpanelanelana dia azo ampidirina any amin'ny fitsarana manana fahefana mahefa. Raha manome loka lehibe kokoa noho ny tolotra farany nataon'ny Orinasa taminao talohan'ny nanombohan'ny arbitrage ianao, dia handoa anao ny lehibe kokoa amin'ny loka na $2,500.00 ny orinasa. Ny andaniny sy ny ankilany dia samy hitondra ny sarany sy ny vola mivoaka avy amin'ny arbitrage ary mandoa ny anjara mitovy amin'ny sarany sy ny lany amin'ny Mpanome ADR.
Fitsipika fanampiny momba ny fitsarana tsy miankina amin'ny endrika ivelany. Raha voafidy ny arbitration mifototra amin'ny tsy fisehoana ivelany, dia tokony alefa an-tariby, an-tserasera ary / na hiorina amin'ny fanoratana an-tsoratra fotsiny ny fifampiraharahana; ny fomba manokana dia fidian'ny antoko manomboka ny arbitration. Ny arbitration dia tsy tokony hiditra amin'ny fisehoan'ny tena manokana avy amin'ireo ankolafy na vavolombelona raha tsy efa nifanarahan'ny roa tonta.
Fetran'ny fotoana. Raha toa ianao na ny orinasa manenjika arbitration dia tsy maintsy atomboka sy / na takiana ao anatin'ny lalàna mifehy ny fetra ny fepetra arbitration ary ao anatin'ny fe-potoana voafetra apetraka eo ambanin'ny Fitsipika AAA momba ny fitakiana mifandraika amin'izany.
Fahefan'ny Arbitrator. Raha manomboka ny arbitration dia ny arbitrator no manapa-kevitra momba ny zonao sy ny orinasanao ary ny fifanolanana dia tsy hampifangaroina amin'ny raharaha hafa na hiaraka amin'ireo tranga na antoko hafa. Ny arbitrator dia manana fahefana hanome fihetsika manilika ny rehetra na ny ampahany amin'ny fitakiana rehetra. Ny arbitrator dia manana fahefana hanome valin-karama ara-bola ary hanome fanafody na fanampiana tsy misy vola azon'ny olona iray araky ny lalàna manan-kery, ny Fitsipika AAA, ary ny Fepetra. Ny arbitrator dia hamoaka mari-pankasitrahana an-tsoratra sy fanambarana fanapahan-kevitra mamaritra ny voka-pikarohana ilaina sy ny fehin-kevitra ifotoran'ny loka. Ny arbitrator dia manana fahefana mitovy amin'ny fanomezana fanampiana amin'ny alàlan'ny tsirairay ary tokony hananan'ny mpitsara any amin'ny fitsarana. Ny mari-pankasitrahan'ny arbitrator dia farany ary mifamatotra aminao sy ny orinasa.
Fanalavirana ny fitsarana ny mpitsara. NY MPIARAKA IZAO dia MANOVA NY ZON'NY MPITONDRA SY NY FANJAKANA AZY MBA HITSARA AMIN'NY Fitsarana na mpitsara iray, fa kosa mifidy fa ny fitakiana sy ny fifanolanana rehetra dia voavaha amin'ny alàlan'ny fifanarahana arak'ity fifanarahana Arbitration ity. Ny fomba fizarazarana dia matetika voafetra kokoa, mahomby kokoa ary ambany kokoa noho ny lalàna mihatra amin'ny fitsarana ary iharan'ny fitsaram-bahoaka voafetra. Raha sendra misy raharaham-pitsarana misy eo aminao sy ny orinasa amin'ny raharaham-panjakana na fitsarana federaly amin'ny raharaha iray hanalana na hampihatra ny mari-pankasitrahana arak'asa na raha tsy izany dia MANAO ZO REHETRA AMIN'NY Fitsarana JURY IANAO SY NY ORINASA, fa kosa mifidy ny hamahana ny disadisa avy amin'ny mpitsara.
Fanalavirana ny kilasy na ny hetsi-panoherana. Ny fitakiana sy ny fifanolanana rehetra ao anatin'io fifanarahana arbitration io dia tsy maintsy araraotina na ampangaina amin'ny lafiny tsirairay fa tsy amin'ny foto-pianarana, ary ny fitakiana mpanjifa na mpampiasa mihoatra ny iray dia tsy azo araraotina na ampiakarina miaraka na ampiarahina amin'ny an'ny mpanjifa hafa. na mpampiasa.
Tsiambaratelo. Ho tsiambaratelo tanteraka ny lafiny rehetra amin'ny fizotran'ny fitsarana. Manaiky ny tsiambaratelo ny antoko raha tsy takian'ny lalàna raha tsy izany. Ity fehintsoratra ity dia tsy manakana ny antoko tsy handefa any amin'ny tribonaly izay fampahalalana ilaina amin'ny fampiharana ity fifanarahana ity, hampihatra ny loka arbitration, na hitady fanampiana vonjimaika na ara-drariny.
Severability. Raha misy ampahany na ampahany amin'ity fifanarahana Arbitration ity hita eo ambanin'ny lalàna fa tsy manan-kery na tsy azo ampiharina amin'ny tribonaly manan-kery, dia tsy misy heriny ny tapany na ny ampahany manokana amin'izany ary hotapahina ary ny sisa amin'ny Fifanarahana dia manohy amin'ny hery sy ny vokany feno.
Zo hisafidy. Ny zo na fetra voafaritra rehetra ao anatin'ity fifanarahana arbitration ity dia azon'ilay antoko iantohana ny fitakiana. Ny fanilihana toy izany dia tsy hanafoana na hisy fiantraikany amin'ny ampahany hafa amin'ity fifanarahana arbitration ity.
Ny fahaveloman'ny fifanarahana. Ity fifanarahana Arbitration ity dia haharitra amin'ny famaranana ny fifandraisanao amin'ny orinasa.
Fitsarana momba ny fitakiana kely. Na eo aza izany voalaza teo aloha izany, na ianao na ny Orinasa dia mety hitondra hetsika manokana any amin'ny tribonaly fitakiana kely.
Fanampiana ara-drariny vonjy maika. Na inona na inona voalaza etsy ambony, ny roa tonta dia mety hangataka fanampiana ara-drariny vonjimaika eo anoloan'ny fitsarana fanjakana na federaly mba hitazomana ny toe-piainana miandry ny fifampiraharahana. Ny fangatahana fepetra vonjimaika dia tsy azo heverina ho fanafoanana ny zon'olombelona na adidy arak'ity fifanarahana Arbitration ity.
Fangatahana tsy iharan'ny arbitration. Na eo aza ireo voalaza teo aloha, ny filazana fanalam-baraka, fanitsakitsahana ny lalàna momba ny hosoka sy ny fanararaotana amin'ny ordinatera, ary ny fanitsakitsahana na fanodinkodinana ny patanty, ny zon'ny mpamorona, ny marika na ny tsiambaratelo ara-barotra an'ny ankilany dia tsy iharan'ity fifanarahana Arbitration ity. Amin'ny toe-javatra rehetra izay ahafahan'ny Fifanarahana Arbitration voalaza teo aloha ny andaniny sy ny ankilany hitory any amin'ny fitsarana, ny antoko dia manaiky ny hanaiky ny fahefan'ny fitsarana ao anatin'ny fanjakan'i Louisiana, ho an'izany tanjona izany.
Ny tranokala dia mety iharan'ny lalàna mifehy ny fanondranana any Etazonia ary mety iharan'ny lalàna fanondranana na fanafarana any amin'ny firenena hafa. Manaiky ianao fa tsy hanondrana, handefa indray, na hamindra, mivantana na ankolaka, izay angona teknika amerikana azon'ny orinasa, na vokatra mampiasa izany angona izany, izay manitsakitsaka ny lalàna na lalàna momba ny fanondranana any Etazonia.
Raha monina any Kalifornia ianao, dia azonao atao ny mitatitra fitarainana any amin'ny Sampana Fanampiana Fitarainana ao amin'ny Diviziona momba ny vokatra mpanjifa ao amin'ny Departemantan'ny Consumer any California amin'ny alàlan'ny fifandraisana an-tsoratra amin'izy ireo ao amin'ny 400 R Street, Sacramento, CA 95814.
Fifandraisana elektronika. Ny fifandraisana misy eo aminao sy ny orinasa dia mampiasa fitaovana elektronika, na mampiasa ny tranokala ianao na mandefa mailaka aminay, na koa mandefa filazana ao amin'ny tranokala na mifampiresaka aminao amin'ny alàlan'ny mailaka ny orinasa. Ho an'ny tanjona fifanarahana, ianao (a) manaiky ny handray fifandraisana avy amin'ny orinasa amin'ny endrika elektronika; ary (b) manaiky fa ny fepetra rehetra, ny fifanarahana, ny fampandrenesana, ny fampahafantarana ary ny fifandraisana hafa izay omen'ny orinasa anao amin'ny alàlan'ny elektronika dia hanome fahafaham-po ny adidy ara-dalàna rehetra izay hahafa-po ny fifandraisana toy izany raha toa ka an-tsoratra izany.
Teny rehetra. Ireo fepetra ireo dia mandrafitra ny fifanarahana iray manontolo eo aminao sy izahay momba ny fampiasana ny tranokala. Ny tsy fahombiazantsika amin'ny fampiharana na fampiharana ny zo na ny fepetra amin'ireo fepetra ireo dia tsy hiasa ho toy ny fandavana ny zo na ny fepetra toy izany. Ny lohatenin'ny fizarana ao amin'ireo fepetra ireo dia natao ho fanamorana fotsiny ary tsy misy fiantraikany ara-dalàna na fifanarahana. Ny teny hoe "anisan'izany" dia midika hoe "tsy misy fetrany". Raha misy fepetra amin'ireo fepetra ireo no heverina ho tsy manan-kery na tsy azo ampiharina, ny fepetra hafa amin'ireo fepetra ireo dia tsy hisy fiantraikany ary ny fepetra tsy manan-kery na tsy azo ampiharina dia hoheverina ho ovaina mba ho manan-kery sy azo ampiharina amin'ny fetra faran'izay omen'ny lalàna. Ny fifandraisanao amin'ny Orinasa dia ny an'ny mpiantoka tsy miankina, ary tsy misy na iza na iza mpiara-miasa na mpiara-miasa amin'ny iray hafa. Ireo fepetra ireo, ary ny zonao sy ny adidinao ato, dia tsy azo omena anao, na afindranao, na afindranao raha tsy misy ny fanekena an-tsoratra avy amin'ny Orinasa, ary izay andrana fanendrena, subcontract, delegasiona, na famindrana manitsakitsaka ny voalaza teo aloha dia ho foana ary void. Ny orinasa dia afaka manendry an-kalalahana ireo fepetra ireo. Ny fepetra sy fepetra voalaza ao anatin'ireo fepetra ireo dia tsy maintsy mifamatotra amin'ireo mpanome.
Fampahalalana momba ny marika. Ny marika rehetra, ny logos ary ny marika serivisy aseho amin'ny tranokala dia fananantsika na fananan'ny antoko fahatelo hafa. Tsy mahazo mampiasa ireo marika ireo ianao raha tsy misy ny fanekena an-tsoratra na ny faneken'ny antoko fahatelo izay mety manana ny marika.
Raha misy fanontaniana momba ity politika ity dia mifandraisa aminay legal@exospecial.com na oviana na oviana.